Akụkọ - Automechanika Shanghai
A na-akpọkarị Automechanika Shanghai dị ka Shanghai mba auto akụkụ ihe ngosi mmezi na-anwale ihe nyocha nke ọrụ ọrụ nyocha, ọ bụ ihe ngosi ụgbọ ala kachasị ukwuu na Asia, ọ bụkwa ihe ngosi Automechanika nke abụọ kachasị elu n'ụwa mgbe ihe ngosi gosipụtara na Frankfurt, Germany. Ya na 15 ihe ngosi Automechanika ndị ọzọ na-emekọ ihe gburugburu ụwa iji kesaa ihe ndị na-azụ ahịa ụwa ma nye mmesi obi ike.
Egwuregwu egwuregwu ụlọ ọrụ kemgbe 2004, mgbe afọ 13 nke mmepe ngwa ngwa gasịrị, Atomechanika Shanghai ghọrọ usoro ikpo okwu kachasị nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ maka mgbanwe ozi, nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, agụmakwụkwọ, ahịa na njikọta ahịa.
16 nke Automechanika Shanghai mere site na Disemba 3-6, 2019 na HONGQIAO mgbakọ mba na ebe ngosi na Shanghai.A na-atụ anya na mpaghara ngosi ahụ ga-erute mita 36,000 na 2019, na-adọta ihe karịrị ndị ngosi 6,500 na ndị ahịa 150,000 na ndị ọbịa ọkachamara. si n'akụkụ nile nke ụwa.
Ngwaahịa ndị egosiri na ihe ngosi a bụ ngwaahịa ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ, ogo dị elu, ọtụtụ ngwa, kwesịrị ekwesị maka mmanu ogologo oge.We emeela mmepe ogologo oge na ụlọ ọrụ griiz na afọ ndị na-adịbeghị anya, na-ewere ụzọ mmepe nke elu - mechie ngwaahịa, na mmepe a kwụ otu ebe, Petroking nwere ọnọdụ dị oke mkpa n'ọhịa mmanu mmanu yana ezigbo ọrụ ịre ahịa. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị maara na ọ ka nwere ụzọ dị anya ịga. Anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye usoro njikwa, mezie usoro nke iwulite ika PETROKING, jiri ezi uche chee mkpa ahịa, ma mepụta ngwaahịa ndị ka elu iji jeere ọtụtụ ndị ọrụ ọrụ.
Ná ngwụsị nke ihe nkiri ahụ, onye nduzi anyị na-eduzi Simon na-anabata mkparịta ụka ahụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụlọ, dị ka otu n'ime ndị na-emepụta griiz na ndị na-ete mmanụ na China.
Anyị na-achọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ HEBEI CO., LTD gara nzukọ a dị ka atumatu, ma nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa na ụlọ ntu ahụ ma kwurịta azụmahịa.
Bolọ ndò anyị Nke bụ 5.2N27, daalụ maka nleta gị!
Post oge: Jul-15-2020